Ahoana ny fanatsarana ny paikadim-barotra tsy mahomby atiny | Martech Zone
Ahoana ny fanatsarana ny paikadim-barotra momba ny atiny tsy mahomby
Nametraka ny fanontaniana izahay tato ho ato - ary nanome famaritana vitsivitsy manodidina - na tsia ny anao Ny paikadim-barotra momba ny votoaty dia ny famokarana, fisian, na fahefana manorina. Ny olana hitantsika hatrany dia ireo orinasa mifantoka fotsiny amin'ny famoahana atiny tsy misy famakafakana sy fanatsarana ny valiny.
Moa ve ny famaritana ny fahaverezan-tsaina manao zavatra mitovy hatrany hatrany nefa manantena valiny hafa? Raha mamaritra ny paikadim-barotra amin'ny atiny ianao dia ao anaty olana ianao ary tena mila mijanona tsy handraraka ny fotoana sy ny loharano ao amin'ny trano fidiovana. ianareo mety mahazo valiny vitsivitsy, fa ny fotoana ahafahanao mitondra fiverenana bebe kokoa amin'ny famatsiam-bola dia mila fandalinana sy ezaka bebe kokoa.
Ity infographic avy amin'ny BrightEdge, ny Sehatra SEO, mifantoka amin'ny fomba mahomby amin'ny tetika marketing mahomby atiny miaraka amin'ny ezaka sosialy sy fampiroboroboana hampitombo ny laharam-pikarohanao amin'ny ankapobeny.
Ny marketing amin'ny atiny dia miasa amin'ny tetika SEO mahira-tsaina hananganana fahefana sy hampitomboana ny fahafantarana ny marikao. Ny atiny tsara dia hanorina fiaraha-miasa tsara amin'ny marikao. Ny ankamaroan'ity atiny kalitao ity dia hanampy amin'ny fampiorenana ny orinasa ambony ny valin'ny fikarohana noho ny fahefana ambony. Sudhir Sharma
Ao anatin'ny paikady marketing votoaty ampitampita, matetika ny prospect dia mifindra amin'ny medium iray hafa. Ohatra, ny atiny zaraina amin'ny media sosialy dia mety hahatratra olona iray izay hikaroka ny marikao, ny vokatrao na ny serivisinao. Mametraka azy ireo eo amin'ny tranokalanao izy ireo ary avy eo dia misoratra anarana amin'ny mailaka mailakao. Volana maromaro taty aoriana dia namaky lahatsoratra tamin'ny alàlan'ny mailaka izy ireo ary nanapa-kevitra ny hiova fo. Paikady voalanjalanja izay handinihanao ny lohahevitrao, handrafetanao ny atiny ary handrefesanao ny valiny dia hitondra fahefana ao anaty.
Tags: famirapiratanafahefana ao anatyvaliny marketing atinypaikady marketing amin'ny atinyfampiroboroboana ny atinyfisondrotanamilina fikarohanaSEOfampiroboroboana ara-tsosialy
Ahoana ny fomba firaketana ny tafatafa Podcast amin'ny Skype
6 lakilen'ny fampiroboroboana ny hetsika amin'ny media sosialy